Miley cyrus နဲ့ Liam Hermsworth တို့ တိတ်တဆိတ်လက်ထပ်ထားကြပြီလား??
On January 19, 2018 January 19, 2018 By fairy
Wrecking ball သီချင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Miley cyrus နဲ့ သူ့ချစ်သူ Liam Hermswroth တို့ဟာ Byron Bay, New South Wales ကို New Year’s Eve အတွက်အပန်းဖြေခရီးထွက်ခဲ့တုန်းက တိတ်တိတ်လေးလက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် သူ့ညီနဲ့ Miley တို့ “တရားဝင်လက်မထပ်ရသေးပါဘူး” လို့ မင်းသားကြီး Thor (Chris Hermsworth) က SiriusXM’s Sway နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဖြေကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
Miley နဲ့ Liam တို့ရဲ့ ရှစ်နှစ်လောက်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ချစ်ခရီးဟာ အခုတော့ သာယာနေပြီဆိုပေမယ့် ဒီလိုအချိန်အခါကိုရောက်ဖို့ hollywood ထုံးစံတွေအတိုင်း ကွဲကြချစ်ကြဆိုတဲ့ drama တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့တာပါ။ The last song ဇာတ်ကားမှာစကြိုက်ခဲ့ကြတဲ့ Miley တို့အတွဲဟာ 2010 ခုနှစ်မှာ သူတို့ နှစ်ယောက်တရားဝင်တွဲနေကြောင်းအသိပေးခဲ့ပြီး စေ့စပ်ပြီးနောက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ လမ်းခွဲခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကြားထဲ Miley ကလဲတခြားလူတွေနဲ့ တွဲနေခဲ့သလို Liam ကလဲ သူ့အတွဲနဲ့သူ ရှိနေခဲ့ကြပေမယ့် ပရိသတ်တွေ အမျှော်လင့်ကြီးမျှော်လင့်နေခဲ့ရတဲ့ ပြန်ပေါင်းထုပ်ခြင်းဇာတ်လမ်းက ၂၀၁၆ မှာမှဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ဘယ်လိုပြဿနာတွေပဲရှိခဲ့ကြပါစေ သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အချစ်ကြီး ချစ်ကြတာ သိပ်ကိုသိသာပါတယ်။ January 13 ရက်နေ့မှာကျရောက်ခဲ့တဲ့ Liam ရဲ့ မွေးနေ့အတွက် Miley ဟာ Twitter နဲ့ Instagram မှာ မွေးနေ့ဆုတောင်းနဲ့ liam နဲ့ သိပ်ပျော်နေပုံရတဲ့ ပုံတစ်ပုံကိုတင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
မနှစ်က နိုဝင်ဘာလမှာလဲ Miley တစ်ယောက် သူ့ twitter မှာတင်ထားတဲ့ပုံတစ်ပုံကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလားဆိုတဲ့ အတင်းတွေသတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲ့တုန်းကလဲ မီဒီယာတွေကို မရိုင်းစိုင်းကြဖို့ Miley က twitter မှာ tweet တစ်ခုပြန်တင်ပြီး သူ့ဗိုက်က ဘာကြောင့်ကြီးနေရတာကို ပုံနဲ့တကွပြန်ရှင်းထားခဲ့ဖူးပါတယ်။(အောက်ကပုံကိုရှိုး !! စကေးကြမ်းချက်နော်။ ?)
ဒီတစ်ခါ လက်ထပ်ထားကြတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကိုတော့ Thor က ငြင်းဆိုထားပေမယ့် ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ Miley နဲ့ Liam တို့ နှစ်ယောက်သားကိုယ်တိုင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
PREVIOUS POST Previous post: TWICE ကျေးဇူးနဲ့ YG Entertainment ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျော်တက်သွားခဲ့တဲ့ JYP
NEXT POST Next post: သူစေ့စပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်တဲ့ Ed Sheeran